Exercise One Video | our notes for our youngers
Comment by Mikozan — November 13, 2009 @ 8:21 PM
အစ်ကိုရေ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် Exercise video file တွေကို mediafire မှာတင်ပေးပါလား
sendspace မှာကဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေလို.ပါ :-0။ ကျွန်တော် အစ်ကိုBlogကို 25.11.09 မှ
တွေ.တယ်ဗျာ  အရင်တုန်းကသာသာတွေ.ခဲ့ရင်ဗျာ ……….
အစ်ကိုရေးတာ အခြေခံအရမ်းကျတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က Programming Language ဆိုအသေရရအရှင်ရရ ရှာနေတာနဲ.အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်  ။ ကျေးဧူးပါပဲဗျာ
Comment by waiyarphonekyaw — November 30, 2009 @ 10:42 AM
ကျွန်တော် ကော်နက်ရှင်ကောင်းရင် Mediafire မှာ ပြောင်းတင်ပေးပါ့မယ်။ ဒီနေ့တော့ ကော်နက်ရှင် လုံးဝ မကောင်းဖူးဗျာ။ ကျွန်တော် ဘလော့လေးကို လာရောက် အားပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Comment by sevenlamp — November 30, 2009 @ 11:38 AM
ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ရမှာပါဗျာ အစ်ကိုကတော်တော်စေတနာပါတယ်နော် အစ်ကိုရဲ့ကျေးဧူးကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့ Programming အရူပ်တွေတော်တော်ရှင်းသွားပြီဗျ အစ်ကိုရဲ့ Professional ဆန်တဲ့ဒီလို ( နည်းပညာတစ်ခုကိုလက်ဝါးကြီးမအုပ်လိုတဲ့စိတ် ) လုပ်ရပ်ကိုလေးစားတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Everything you can do ! Good Luck !
Comment by WIAYAR — December 2, 2009 @ 10:39 AM